Muqdisho: Gudoomihii sadexaad ee degmooyinka Banaadir oo xilka laga wareejiyey – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Waxaa maanta si rasmi ah xilka u wareejiyey gudoomihii hore ee degmada Hiliwaa ee gobolka Banaadir, Cumar Cabdulle (Jacfaan), kadib markii uu xilka ka qaaday gudoomiyaha gobolka Banaadir Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab).
Xaflad maanta ka dhacday xarrunta degmada Hiliwaa ayuu xilka ku wareejiyey gudoomihii hore ee degmadaas, waxaana xilka la wareegay gudoomiyaha cusub Maxamed Axmed Xaashi.
Gudoomihii hore Cumar Jacfaan ayaa sheegay inuu gacan siinayo maamulka cusub ee degmada Hiliwaa, halka gudoomiyaha cusub Maxamed Axmed Xaashi uu uga mahad celiyey gudoomiyihii hore howlihii uu soo qabtay oo uu sheegay inuu kasii wedayo halii ay marayeen.
Sidoo kale, guddoomiyaha cusub ayaa sheegay inuu shacabka degmada ugu adeegi doono si wanaagsan, howsha ugu horreysa ee aan ka shaqeynayana waa sugidda amniga, markii aan nabad helno ayaana wax walba heli karnaa ayuu hadalkiisa ku daray.
“Howsha ugu horreysa ee aan ka shaqeynayo waa ammaanka, waxaana shacabka ka codsanayaa inay igala shaqeeyaan ammaanka, waayo markaas ayaan waddooyin dhisan karnaa, nalal xiran karnaa, banooniga si wanaagsan u ciyaar karnaa,” ayuu mar kale yiri guddoomiyaha cusub.
Waa gudoomiyihii 3-aad ee xilka laga qaaday, islamarkaana xilka ku wareejiyey gudoomiyaha cusub ee la magacaabay, waxaana horay xilalka u wareejiyey gudoomiyaashii hore ee degmooyinka Shibis iyo Dharkeynley.
Waxaa jira gudoomiyaal kale oo xilka laga qaaday, inkastoo aan weli la shaacin, waxaana ka mid ah gudoomiyaha degmada Boondheere Cumar Istakiin, waxaana la filayaa inuu sabtida soo socota xilka ku wareejiyo gudoomiyaha cusub ee badelaya.
Gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir oo aan aheyn kuwa lasoo doortay ayaa muddo dheere hayey xilalkaas, iyadoo Gudoomiyaha cusub ee gobolka Jen. Muungaab ku dhiiraday inuu xilka qaar ka mid ah.